News - ကိုရီးယား၌မီးပိုက်လိုင်းအတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖိုင်ဘာလေဆာပြွန်ဖြတ်စက်
မီးသတ်ပိုက်လိုင်းများတွင်ကိုရီးယားသည်စက်ဖြေရှင်းချက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြည့်အဝမှာ Automatic Fiber လေဆာ Tube
အမျိုးမျိုးသောနေရာများမှာစမတ်မြို့ကြီးများ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏အရှိန်နှင့်အတူရိုးရာမီးကာကွယ်မှုမီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏ "အလိုအလျောက်" လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အစမတ်မြို့ကြီးများ၏မီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အပြည့်အဝအမှုအရာနည်းပညာ၏အင်တာနက်အသုံးချကြောင်းအသိဉာဏ်မီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်မနိုင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ စမတ်မီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဆောက်လုပ်ရေးဒေသခံနှင့်ဌာနဆိုင်ရာမှတိုင်းပြည်မှကြီးစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
မီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆောက်လုပ်ရေးလူတိုင်းအကြောင်းပါ။ စမတ်မြို့ကြီးများ၏တည်ဆောက်ရေးများအတွက်, မီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆောက်လုပ်ရေးထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်လိုစမတ်မြို့ကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို fit စေကာအသိဉာဏ်မီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်အတည်ဆောက်ရန်မြို့မန်နေဂျာစဉ်းစားပါရမယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များ: လေဆာ marking နှင့်ပြွန်အပေါ်ဖြတ်တောက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက် - ဖြတ်တောက်ခြင်းမတိုင်မီပြွန်များပေါ်တွင်အမှတ်အသားကိုအပြီးသတ်ရန်အလိုအလျောက်အစုအဝေးဝန်စက်တွင်အမှတ်အသားစနစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
မီးကာကွယ်မှုပိုက်လိုင်းတစ်ငြိမ်ပြည်နယ်အတွက်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပြီးကတည်းကပိုက်လိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုတင်းကျပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုက်လိုင်းဖိအား, ချေးခုခံနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံဆီးတားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးအများဆုံးမီးပိုက်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်: slotted spheroidal ရေပေးဝေရေးသွန်းသံပိုက်, ကြေးနီပိုက်, သံမဏိပိုက်, အလွိုင်းပိုက်, စသည်တို့ကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်
P2060A ဖြတ်တောက်ခြင်းပိုက်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတဦးတည်းအချိန်မရွေးဖြတ်အလွန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အလိုအလျောက်၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမီးသတ်သမားအရာဝတ္ထုများတွင်မီးဖျန်းစနစ်၏စက်ရုံ extinguishing အခြေခံအကျဆုံးမီး Pre-လုပ်ကြံပိုက်၏ရေးစပ်ရမည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပူးတွဲ, ထွက်ပေါက် fittings နှင့်ဖျန်းခေါင်းကို welded, နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြတ်တောက်ခြင်း, လာကြတယ်နှင့်၎င်း၏မူရင်း function ကိုဖျော်ဖြေဖို့ welding နှင့်အတူပေါင်းစပ်။
P2060A အော်တိုလေဆာပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ပြွန်အထူးပစ္စည်းကိရိယာဖြတ်တောက်တဲ့ High-end လေဆာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ကိုင်ရန်အလွန်အမင်း automated အလွန်တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းလွယ်ကူသည်, နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပြွန် processing စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်အကြီးစားစက်မှုထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တခြားအဆင့်မြင့် features တွေဖို့အဆင်ပြေအောင်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အရှင်မီးကာကွယ်မှုလယ်ပြင်၌ သာ. အသုံးပြုသူများကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ကွဲပြားခြားနားသောပိုက်ချင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ချအရှည်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးတွေ့ဆုံရန် serialized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသတ္တုလေဆာပိုက်ရှုးသတ္တုပိုက်များပေါ်တွင်ဆိပ်ကမ်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပိုက်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ပတ်ပတ်လည်သံမဏိပြွန်၏ပြွန်, ကြေးနီပြွန်, လူမီနီယံပြွန်, သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းပြွန်, စသည်တို့ဖြတ်နိုင်ပါတယ် .; ပတ်ပတ်လည်ပြွန် groove ဖြတ်တောက်ခြင်း, etc ပတ်ပတ်လည်ပြွန် slot, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်လာကြတယ်, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းပုံစံ
ရွှေ Vtop ပိုက်လေဆာ Cutter P2060A အင်္ဂါရပ်များ
စက်ဖြတ်တောက်ရွှေလေဆာပြွန်ဒီဇင်ဘာလ 2013 ခုနှစ်စက်ဖြတ်တောက် YAG ပြွန်၏ပထမ set ကိုရောင်းချခဲ့သည် 2012 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ 2014 ခုနှစ်, ပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကတော့ကြံ့ခိုင်ရေး / အားကစားရုံပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ဝငျခဲ့သညျ။ 2015 ခုနှစ်တွင်, များစွာသောအမျှင်ဓာတ်လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ယခုမှာကျွန်တော်အမြဲတိုးတက်အောင်နှင့်ပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်နေကြသည်။
စက်နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ 3000w P2060A
မော်ဒယ် number ကို P2060A
tube / ပိုက်အရှည် မက်စ်6လ
tube / ပိုက်အရွယ်အစား mm20mm-200mm
tube / ပိုက်တင်အလေးချိန် မက်စ် 25kg / မီတာ
bundle ကိုအရွယ်အစား မက်စ် 800mm * 800mm * 6000mm
bundle ကိုအလေးချိန် မက်စ် 2500kg
လျှပ်စစ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး AC380V 60Hz 3P
မီးသတ်ပိုက်လိုင်း Demo ဗီဒီယိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည် P2060A စက်